PMP Asambodo Ọrụ Ọrụ - ITS Tech School
Enyemaka Ohere Mgbe Emechara Nkwekọrịta PMP
Kedu uru nke Usoro Nlekọta Ọrụ Project?
Isi ihe ma tinye mgbakwunye ọzọ na Resume gị
Ọ na-emesi Job ike
Gbanwee ọnọdụ nyocha ọrụ gị na ndị ọkachamara na-eto eto
N'ọnọdụ ọ bụla, oge ị na-enweghị ọrụ, ị maara mkpa ọ dị ịbụ onye na-agba n'ihu ndị na-ese okwu na ịchọta ọrụ. Ndụ ọkachamara jupụtara na nsogbu na ndị na-amalite ga-aghọta ahụmahụ ahụ. Ịmụta bụ ihe nwere mmetụta iji merie arụ ọrụ omenala na ịrụ ọrụ na-amị mkpụrụ. Ọ dị oke mkpa na àgwà ndị a na-eme ka obi dị ha ụtọ na ha bụ ihe ga-enwe mmetụta zuru oke na ntinye aha. Iji mee ka nlọghachi gị n'elu, ntinye akwụkwọ nke PMP bụ ịmalite ịga n'ihu iji mezuo ihe mgbaru ọsọ gị.
Ihe nchịkwa Project Management bụ ihe niile gụnyere nkwado ziri ezi nke nwere ike ịgbanwe ndị ọrụ nnochite anya ndị ọkachamara na ndị ọkachamara bara uru bụ ndị na-achọ ka ha meghee ọnụ ụzọ. Akụkọ ahụ bara uru maka ndị ọrụ ngo, ìgwè ndị ọrụ, ndị ọrụ ngo, ndị na-enyere aka / ndị injinia, ndị mmepe software ma ọ bụ onye ọ bụla na-anwa ịbụ onye njikwa ọrụ.
Ahịa ọrụ ga-agbanwe n'ezie maka gị. Achọghị ịchọpụta ọrụ nke na-akwụ ụgwọ, nke kacha sie ike bụ ịchọpụta ndị nwere ezi uche ga-emejupụta ebe ahụ, nke ndị òtù na-achọ taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịma na PMP ga-egosi ndokwa ọzọ nke ohere.
Onye oru nchịkwa oru ngo, na-eme ka ọ mara ihe ma na-eme ka a tụkwasị ya obi. Mgbe ha na-ezute ihe niile achọrọ iji mezuo ọrụ nhazi niile site na mmalite, ịhazi, igbu, ịdebe, ịchịkwa, na nkwubi okwu. Asambodo a bu ihe ndi mmadu kwadoro nke oma site na otutu ulo oru. Ndị ọzọ karịa ịgbasa ọrụ ahụ na-agbanye, ọ ga-ewetakwa ụgwọ ọrụ maka ụfọdụ ndị.
Maka otu ọrụ nlekọta ntụrụndụ ọ bụla, onye ọ bụla na-ekwu okwu n'olileanya bụ ndị ọkachamara na-ahụ anya ma ọ bụ ndị nwere akwụkwọ ntinye aka na PMP ị na-egosi ọdịiche. Nke ahụ bụ ihe nwere ike hụ na ebe a na-elekwasị anya. Ọ na-egosi na ị kachasị mma ịkwalite ọrụ na-abata n'ime ihe nzukọ ahụ na-atụ anya n'aka gị dịka onye njikwa. N'ọnọdụ ọ bụla nzukọ a bụ mba ma ọ bụ ọtụtụ mba, PMP nwere ike ịbịara gị nnukwu mmalite mbụ na ọganihu dị mma n'ọdịnihu. Iji mewanye uru nke otu nzukọ na mmalite gị, ọ dị mkpa ịmepụta ozi na zutere na nke ahụ bụ ihe mere ọzụzụ PMP bụ mkpebi ziri ezi maka ndị na-achọ ọrụ na gburugburu ụwa.
Onye ọkachamara a na-edebanye aha ga-achọpụta na ị nwere àgwà ndị na-agbanwe gị ka ị bụrụ onye inyeaka hotspot maka nzukọ. PMP na-ekwe nkwa mbupu na ọrụ ike. Association chọrọ inye onyinye ma nye ohere maka ndị nnọchianya na-eweta ezi ihe.
PMP na-agbasawanye uru gị ma mee ka ị nwee ike maka ọrụ nchịkwa niile nke na-ewuli ikike dị iche iche na ọnọdụ a kpọsara. Ebe nchekwa ahụ gosipụtara nkwenye gị na àgwà gị n'ọhịa.
Ihe nchịkwa Project Management bụ nkwupụta ziri ezi niile gụnyere ya mere ị na-eme ka nsogbu gị dị. Ị nwere ike n'enweghi ike gbanwee ọnọdụ nyocha ọrụ gị na ndị ọkachamara na-amịpụta ihe. A na-enye ndị ọsụ ụzọ otu aka, ndị ọrụ ngo, ndị na-enyere aka / ndị injinia aka, ndị mmepe software ma ọ bụ onye ọ bụla ruru eru, nke nwere ahụmahụ nke na-anwa ịbụ onye njikwa ọrụ.